Azụmahịa dabere na Akaụntụ 3-D (ABM): Otu esi eweta ahịa B2B gị na ndụ | Martech Zone
Ka anyị na-agba ọsọ na-arụ ọrụ anyị na ndụ onwe anyị n'ịntanetị, mmekọrịta na njikọ B2B abanyela n'ụdị ngwakọ ọhụrụ. Ahịa-Dabere na Ahịa (ABM) nwere ike inye aka ịnye ozi dị mkpa n'etiti ọnọdụ na ọnọdụ na-agbanwe agbanwe - ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ dakọtara mgbagwoju anya n'ebe ọrụ na akụkụ ọhụrụ nke nkà na ụzụ nke na-ejikọta data dị mma, nghọta amụma, na mmekọrịta oge.
N'ịbụ onye ọrịa COVID-19 na-enyocha ya, ụlọ ọrụ gburugburu ụwa echegharịala nhazi ọrụ dịpụrụ adịpụ.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ụlọ ọrụ nyocha nke CNBC kwuru na ha ga-agbaso ụdị ụlọ ọrụ ngwakọ, yana ndị ọrụ na-arụ ọrụ nwa oge site n'ụlọ, ebe atọ ọzọ na-ekwu na ha ga-alaghachi. n'ime-mmadụ-mbụ ọnọdụ.
Ihe karịrị ọkara nke ndị ọrụ US bụ ndị na-ahọrọ ọrụ dịpụrụ adịpụ na-ahọrọ ịkwụsị kama ịlaghachi n'ọfịs, na-eduga ndị na-ere ahịa ka ha megharịa ndepụta kọntaktị ha dị ka azụmahịa-azụmahịa (B2B) ndị na-azụ ahịa na-ahapụ ụlọ ọrụ ochie wee malite na ndị ọhụrụ.
N'ime ọrịa ọjọọ a niile, ahịa dijitalụ egosila usoro ndụ iji jikọọ na akaụntụ ebumnuche yana atụmanya n'etiti ihe omume na nzukọ ndị mmadụ kagburu. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-ekwu na ahịa ha emeela mgbanwe "dị egwu". n'oge ọrịa na-efe efe, na ABM na-ebili n'ihu. Anọ n'ime ndị isi ahịa azụmaahịa ise na-ekwu na ha ga-abawanye itinye ego na ABM n'afọ na-abịa; njikọ nke otu na otu, ahaziri ahaziri nke ABM nyere nwere ike iwepụta ego nrịgo ruru 30% ma e jiri ya tụnyere mgbasa ozi ọdịnala otu-na-ọtụtụ.
Otú ọ dị, iji nweta ikike ahụ, ụlọ ọrụ B2B ga-emerịrị usoro dị n'otu. Amamịghe echiche (AI) na mmụta igwe (ML) nwere ike inyere ụlọ ọrụ aka ịghọta ogologo oge a na-achọ otu echiche nke ndị ahịa- mana naanị ma ọ bụrụ na ha etinye aka na atụmatụ data akụkụ atọ.
Akụkụ atọ nke data ABM
Ọnụọgụ data na Quality
Data sitere na onye nyocha teknụzụ Forrester na-egosi na ihe na-erughị pasent atọ na-ekewa ọwa 10 kachasị elu na ọkwa nke isi mmalite ndị na-azụ ahịa B2B na-enyocha mgbe ha na-eme nchọpụta ndị nwere ike ịre ahịa - nke na-egosi na ụlọ ọrụ ga-amarịrị n'ọtụtụ usoro ma jiri akara aka niile dị n'aka ha iji jikọọ. na-atụ anya ma na-ejere ha ozi dị mkpa ọdịnaya nke na-akpali mkpebi ịzụrụ.
Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-adabere na ire nkwalite, nkwalite na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọhụrụ nye ndị ahịa dị adị nwere ike nweelarị profaịlụ onye ọrụ dabere na ọrụ na webụsaịtị ụlọ ọrụ, n'ime ọgbakọ nkwado ya, yana nyiwe ndị ọzọ nwechara.
Data a na-etolite ọkpụkpụ azụ nke ABM dị irè. Mana ọ bụ ezie na ọnụọgụ data dị mkpa, ọnọdụ na ịdị mma dị oke mkpa, n'agbanyeghị na ọ siri ike ijide. Companieslọ ọrụ achụmnta ego na-atụle ojiji na ntinye data dị ka otu n'ime ihe ịma aka ABM ha kachasị elu, Forrester chọpụtara. Dịka ọmụmaatụ, n'ofe mpaghara mpaghara dị iche iche nke otu ụlọ ọrụ, mkpọsa mpaghara nwere ike ikpokọta isi data dị iche iche nke siri ike ịmekọrịta. Ngwọta ABM zuru oke nwere ike ịnakwere ntinye dị iche iche nke onye ọ bụla ka ị na-etinye ọgụgụ isi algọridim iji kọwaa nke ọma na ijikọ ozi ahụ.
Ike amụma amụma
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-adabere ugbu a na AI iji nyochaa ohere maka atụmanya ịghọ ndị ahịa, na-eji algọridim ọkaibe na-ejikọta mmekọrịta gara aga na nsonaazụ nwere ike dabere na profaịlụ omume yiri nke ahụ. Ụdị amụma ndị a dị oké mkpa maka ụlọ ọrụ ka ha nwee ike ịnye ahịa n'otu n'otu n'ogo.
Amụma algorithmic na ndụmọdụ na-akawanye mma ka oge na-aga ka mmekọrịta ndị ọzọ na-eme - mana ha na-adaberekwa na iwu azụmahịa nke ụkpụrụ ụlọ ọrụ na-emepụta, omenala mpaghara ma ọ bụ kalenda, na ihe ndị ọzọ n'otu n'otu na ụlọ ọrụ B2B ọ bụla. Ndị otu dị n'ime kwesịrị inwe ike imetụta ụdị amụma, na-eme ka ike nhazi AI na nghọta mmadụ, mepụta mkpọsa nwere oke mkpa.
Ikike nke ezigbo oge data, yana ikike ibuga ha
Ọnọdụ n'oge dị oke mkpa maka mkpọsa ABM iji wepụta ozi ziri ezi na ọwa ziri ezi maka ọkwa a na-atụ anya ya na njem nleba anya ịzụrụ. N'ihi na atụmanya ndị na-etinye aka na ọdịnaya ịntanetị na-anabata ozi ndị ọzọ maka nkeji 20 kachasị, ọkwa akpaghị aka maka ndị otu ahịa na ikike izi ozi ahaziri iche dị oke mkpa iji hụ na ịkpọtụrụ ozugbo na isi mkpebi dị mkpa.
Ike teknụzụ ahụ nwere ike ịdị aghụghọ iji nweta, mana maka ụfọdụ ụlọ ọrụ, iwulite ntụkwasị obi na data ahịa dị mkpa iji nweta ọtụtụ akpaaka bụ ihe ịma aka siri ike. Forrester chọtara nnukwu ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ karịa obere ụlọ ọrụ na-ekwu na "enweghị ịzụrụ ahịa" bụ ihe mgbochi maka ịga nke ọma ABM. ABM na-ebugharị data, akpaghị aka chọrọ ịzụ ahịa na ịre ahịa ijikọ ọnụ, nke igwe igwe na-akwado nke na-enyere aka nzaghachi ozugbo na ọnụ ọgụgụ.
Akụkụ ndị dabere na-achọ teknụzụ siri ike
Ọ bụ ezie na nke ọ bụla n'ime akụkụ data atọ a dị oke mkpa, ọ nweghị nke bụ ihe ngwọta kwụ ọtọ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ enweelarị data bara ụba, mana enweghị ngwaọrụ iji jikọta ma mee ihe na ozi gbachiri emechi. Ntụle amụma nwere ike inye nghọta na-atụ anya, mana chọrọ data akụkọ ihe mere eme dị mma iji wepụta ndụmọdụ ndị dị mkpa. Na naanị site na ijikọ ML na nghọta data iji kpalie ahịa na ịre ahịa, ụlọ ọrụ nwere ike ịmepụta njikọ oge na-emechi azụmahịa n'ahịa ahịa na-agbanwe agbanwe.
Iji mee ka ihe atọ niile dị n'otu ma mee ka ihe ịga nke ọma ABM, ụlọ ọrụ kwesịrị ịchọ njedebe ABM nke na-eme ka ịdị n'otu data, ọgụgụ isi nke AI na nhazi oge. Arụmọrụ egosipụtara na mpaghara ndị dị mkpa yana ikike ịhazi akụkọ na arụmọrụ maka nkewa na otu ndị otu nwekwara ike inyere ụlọ ọrụ aka imeghari atụmatụ ABM ha ka ha nwee ike ịga nke ọma n'ahịa ahịa.
Site na akụ na ụba ụwa na mgbanwe mgbanwe, ebe ọrụ ngwakọ ọhụrụ na usoro ịzụrụ B2B na-agbanwe ire ahịa na azụmaahịa ụlọ ọrụ. N'ịbụ ndị nwere ngwa ABM siri ike, AI kwadoro, ụlọ ọrụ B2B nwere ike iji data na akụkụ atọ iji nye ozi dị mkpa maka ọnọdụ azụmahịa kachasị ọhụrụ, na-eme ka mmekọrịta na-adịte aka.
Tags: abmabm dataahia di na akaụntụahịa b2bdataogo dataọnụọgụ datamrpdata amụmaezigbo oge data
Otu esi eweda ọnụ ahịa ndị ahịa gị maka ROI kacha